Enwere ike iji 16 n'ime 1IPTV Encoder na Remote HD Education, Streaming Live Broadcast, Ime Mgbakọ vidio Ọtụtụ windo, Nlekọta IPTV na ntanetị IPTV ọzọ - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » News » Enwere ike iji 16 n'ime 1IPTV Encoder na Remote HD Education, Streaming Live Broadcast, Ime Mgbakọ vidio Ọtụtụ windo, Nnabata ile IPTV na ntanetị IPTV Streaming ọzọ.
Enwere ike iji 16 n'ime 1IPTV Encoder na Remote HD Education, Streaming Live Broadcast, Ime Mgbakọ vidio Ọtụtụ windo, Nnabata ile IPTV na ntanetị IPTV Streaming ọzọ.
:Bọchị: 2017-08-14 / Atiya: News
Ahịa taa nke asọmpi TV siri ike chọrọ ka ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị na-ahụ maka TV na-enye ohere maka ọdịnaya na ihuenyo ọ bụla, na-emeziwanye arụmọrụ ma belata ịdị mgbagwoju anya n'ofe usoro dị iche iche. Nke 16in1 FMUSER FBE216 onye ntinye ederede bu n’obi ileba anya n’uche maka nnyefe vidiyo. Enwere ike iji ya maka sistemụ nkesa dijitalụ dị iche iche dị ka agụmakwụkwọ HD dịpụrụ adịpụ, ịgbasa ozi na-ebi ndụ, ogbako vidiyo vidio dịpụrụ adịpụ, ntanetị IPTV na nnabata ndị ọzọ.
• 720, 720P, mkpebi 1080P
• H.265 /H.264 / Profaịlụ Ntọala / profaịlụ dị elu / nkwado profaịlụ mkpakọ vidiyo dị mkpa
• Na-akwado ntọala ọnụego GOP
• MP3 mpịakọta na AAC-LC / HE
• Enwere ike ịgbanwe mmezi olu
• Pịgharịa Caption (OSD) na logo nwere ike itinye ya
• Ntọala paramita foto
• Nchịkwa na ntanetị
• Enwere ike igbanwe ọnọdụ mmepụta Audio –Stereo, aka ekpe na aka nri
• Mmemme na-akwado ihe ruru TS atọ n’elu IP iyi
• Na-akwado ffmpeg yana ONVIF Network Video Protocol
• Ọ na-enye usoro UDP / RTMP / RTSP / HTTP
• Nhazi otutu, ọtụtụ na nhazi ọtụtụ
• Na-akwado ngosipụta akụrụngwa n'otu oge n'otu kọmputa
• 1000M / 100M ngbanye okpukpu abụọ zuru oke
• Ngwudata ọtụtụ ọpụpụ maka ọrụ ntinye ọ bụla iji kwado VOD, Mgbasa ozi, OTT na IPTV, web ma ọ bụ ngwa mobileset top igbe ngwa.
• Na-akwado Microsoft WMENCODER na WDM ije
• Dakọtara na WDM mode yana ngwanrọ Windows VFW
Ihe ntanetị 16in1 nwere ike ịkwado vidiyo 16 na 16 audioMI mkpokọta site na ntinye n'otu oge. Enwere ike iji stereo 3.5mm ma ọ bụ HDMI maka ahịrị ọdịyo. Ọwa ọ bụla nke ntinye HDMI nwekwara ike ịkwado mmepụta iyi IP 3 na mkpebi abụọ dị iche iche maka bitrate na-agbanwe. Nke a pụtara na ịnwere ike ịnweta otu nwere obere mkpebi na nke ọzọ nwere mkpebi ogo dị elu. Otu IP iyi ọ bụla na-akwado ụdị mmepụta IP Procols abụọ.
FBE216 nwere ike ịnye iyi H.265 / H.264 / ntinye ntanetị nwere ọtụtụ ụzọ ntinye IP na-eweta nnwere onwe na sava dị iche iche maka ngwa OTT na IPTV dịka Windows Media Server, Adobe Flash Server, RED5, Wowza Media Server na sava ndị ọzọ dabere Usoro iwu HTTP / RTSP / UDP / ONVIF / RTMP / RTMP. Ihe ntinye ederede na-akwado ndozi VLC ma rụọ ọrụ nke ọma na ọtụtụ nyiwe ọwa mmiri na mgbasa ozi na-ebi ndụ dị ka ọrụ Ustream, Facebook live, Livestream, Red5, Tikilive, Youtube Live, WOWZA, Twitch, FMS, Meridix, Netrmedia, Streamspot na Dacast. SDdị SDI dịkwa.
Ebee ka You nwere ike iji ihe nzuzo 16in1 mee?
Enwere ike iji 16in1 FMUSER FBE216 encoder na ngwa dị iche iche. Ebe obu na o na akwado ihe ochicho na ntighari ma n’abali ma n’igwe netwọko, ndi FBE216 na enyere ndi ulo oru aka ha ibanye n’ime ya, bawanye ahia ahia, belata ego njem ma gbasaa nke obula site na ntinye vidiyo. Ọ na - enye usoro nkwanye ugwu dị ike ma na - akwalite mgbasa ozi ohuru site na ịnyefe ọwa mgbasa ozi ọdịnala na ịmepụta ụzọ ụzọ mgbasa ozi iji gbaa ụmụ amaala ume na akụkọ nta akụkọ.
FBE216 na - enyere ụlọ akwụkwọ aka site na ị nyefee usoro nzizi agụmakwụkwọ. Rmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịga n’ihu agụmakwụkwọ ha ma ọ bụ ndị na - enweghị ike ịga klas nkịtị n’ihi ọrụ ndị ọzọ nwere ike irite uru na azịza ndị a dịka ha nwere ike lelee nkuzi ọ bụla oge na ebe ọ bụla. Ihe ntanetị 16in1 FMUSER FBE216 nwere ike inyere ụlọ ọrụ niile na ụlọ ọrụ niile chọrọ ịmụba iru ha ma nye ndị na-ege ha ntị ọdịnaya nke ọma.
Ebee ka ị nwere ike ịtụrụ 16 n’ime 1 HDMI IPTV ihe ntanetị?
«Nke gara aga: Etu esi eji IPTV Encoder mee ihe Nweta Mgbasa Ozi Ntinye Aka na Ntanetị?
FMUSER RDS-Ihe ngosipụta gosipụtara na Nzukọ RDS Forum :Osote "